Madaxda Afrika ee diiddan inay kursiga ka degaan marka xilkoodu dhammaado oo sii kordhaya
Mogadishu - 15:48:52
Sunday October 20, 2019 - 22:04:26 in Wararka by Super Admin
Madaxweynaha waddanka Guinea, Alpha Conde ayaa noqday hoggaamiyihii ugu dambeeyay ee ka soo hor jeestay inuu kursiga banneeyo, isagoo isku dayaya in mar saddexaad uu u tartamo xilka madaxtinimo sanadka 2020.
Taas ayaa tilmaamaysa in Afrika ay weli taagan tahay halkii ay taagneyd 40 sanadood ka hor oo ah inay madaxdu isku dhejiyaan kursiga hadday doonaan khasaaro walba ha kala kulmaan.
Rabshado ayaa ka dhashay qorshaha uu Alpha Conde ku doonayo xil kordhinta, taasoo ka hor imaanaysa dastuurka dalkaasi, waxaana kummanaan kun oo qof ay toddobaadkan isugu soo bexeen dalkaasi.
Haddii aan xusno madaxda Afrika ee Kursiga laga dejin waayay, waxaa ka mid ah;
Alpha Conde: Madaxweyne Conde oo xilkiisii labaad ee madaxtinimo uu ku eg yahay 2020-ka, waxaana isagoo 81 jir ah uu diiddan yahay in uu xilka ka dego xitaa haddii ay u dhammaatay labadii jeer ee uu madaxweynuhu u tartami karo xilka ee ku xusan dastuurka dalkaasi.
Pierre Nkurunziza (Burundi): Madaxweynahan oo Burundi maamulaya tan iyo 2005 ayaa waxaa sanadkii 2015 uu ku dhawaaqay inuu mar saddexaad u tartami doono jagadan.
Inkastoo rabshado badan oo ay kummanaan ku dhinteen ay dalkaasi ka dheceen haddana waa la kari waayay in kursiga laga fujiyo.
2018 waxa uu wax ka beddelay dastuurka dalkaasi, isagoo kordhiyay muddo xileedka madaxweynaha oo uu ka dhigay illaa 7 sano, taasoo ka dhigan inuu tartanka madaxweynenimo isu soo taagi karo laba jeer oo kale, dalkana xukumi doono illaa 2034.
Paul Biya (Cameroon): waa madaxweynaha ugu da’da weyn dalalka Saxaraha ka hooseeya (86 jir), waxa uu xilka Cameroon qabtay sanadkii 1982-kii.
2018-kii waxaa golaha Baarlamanka dalkaasi meesha ka saareen xadka loo oggol yahay in Madaxweynuhu uu kaga degayo kursiga, waxaana illaa iyo haatan uu ku fadhiyaa kursiga.
Idriss Deby (Chad): waxa uu dalka Chad ku qabsaday afgembi militeri 1990-kii, iyadoo 2005-tiina la tir tiray qaybtii dastuurka ee qoreysay in laba jeer oo keliya uu madaxweynuhu isu soo sharrixi karo xilka.
Deby ayaa haata isu soo sharrixi kara madaxtinimada laba jeer oo dambe marka sanadka dambe 2020 loo soo istaago tartanka doorasho.
Azali Assoumani (Comoros): Ninkan oo xilka dalkiisa ku qabsaday afgembi militeri sanadkii 1999-kii waxa uu ku guuleystay cod u qaadid la sameeyay 2018-kii in meesha laga saaro muddo xileedka madaxweynaha ee ku xusan dastuurka.
Codeyntaaasi waxay u suuro gelinaysaa in Azali uu laba jeer oo kale oo kale oo min 5 sanadood ah uu sii hayo jagada.